Usolwa ngokubaleka nemali yerenti usaziwayo | News24
Usolwa ngokubaleka nemali yerenti usaziwayo
Durban - Ufunwa phansi phezulu umlingisi emidlalweni kamabonakude okuthiwa ubaleke nerenti efulethini abehlala kulo angalikhokhelanga selokhu aqala ukuhlala kulo nyakenye.
Lesi silomo sikamobonakude esike saduma emdlalweni owuchungechunge iGenerations sidlala indawo kaDumisani, ogama laso langempela nguDumisani Mbebe ufunwa nguNkz Najib Salim ongumnikazi wefulethi elikunombolo 69 kuWillern Court emgwagweni uMargaret Mncadi Street kuleli dolobha.
ILANGA LangeSonto lifice uNkz Salim enkemile ngesikhathi efika kuleli fulethi ethola ukuthi ingidi abeyifakile evimbela uMnu Mbebe ukuba angangeni engakayikhokhi irent kaR12 000 ayibonwa.
OLUNYE UDABA: Kunqatshwe ilobolo lokamculi kamaskandi
UNkz Salim usebenzise ukhiye oyisipele isicabha savuleka wamangala ukuthola ukuthi uMnu Mbebe uqoqe zonke izimpahla zakhe wakhala iphepha engamkhokhelanga nesenti.
UNkz Salim utshele ILANGA LangeSonto ukuthi uMnu Mbebe nowakwakhe baqale ukuhlala efulethini lakhe nyakenye, becelelwe nguMnu Zuki Nodada.
Uthi kusukela ngaleso sikhathi kuze kube manje bebengakaze bayikhokhe irenti, bebelokhu bebika imbiba nebuzi.
"Ngifikile kubo ngenyanga edlule ngizobacela ukuba bakhokhe, abanginikanga lutho ngase ngithatha isinqumo sokuba ngikhiphe ingidi yabo ngafaka eyami bengekho, ngabazisa ukuthi ngifuna imali yami kuqala bese ngiyabavulela.
Njengoba ngiza namuhla nje bengithi bazonginika kodwa ngiyamangala uma sengitshelwa ukuthi bafike ngoMsombuluko bephelezelwa ngamaphoyisa bathutha bahamba," kusho uNkz Salim ngokudumala.
UNkz Salim silobe lapha izolo eyovula icala lokugqekeza emaphoyiseni.
Imizamo yokuxhumana noMnu Mbebe ayiphumelelanga ngoba ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini belunomyalezo othi inombolo eshayelwayo ayisebenzi.